Madaxweyne Farmaajo oo usafraya Jabuuti | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxweyne Farmaajo oo usafraya Jabuuti
Madaxweynaha JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu maanta u ambabaxo waddanka Jabuuti si uu uga qeyb galo shir muhiim ah oo halkaas ka dhacaya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu ka duulo magaalada Muqdisho isagoo kusii jeeda waddanka aan dariska nahay ee Jabuuti halkaasoo uu uga qeyb gali doono shir ay isugu imaanayaan madaxda urur goboleedka IGAD.
Dowladda Federaalka ayaa horay u shaacisay in uu jiri doono shir ay IGAD isugu imaanayso kaasoo ka dhici doona waddanka Jabuuti, waxaana DF ay sidoo kale sheegtay in ay dacwad ka gudbisay dalka Kenya oo ay ka joogaan ciidamo Nabad ilaalin ah Soomaaliya. Xiriirka labada dal ee Soomaaliya ayaa xumaaday sanadihii u dambeeyay, iyadoo madaxweyne Farmaajo uu sii hurinayo xiriirka labada dal ee mad-madowgu soo galay.
Shirka lagu qabanayo waddanka Jabuuti ayaa looga hadli doonaa arrinta ku aadan waddanak Itoobiya gaar ahaan colaadda gobolka Tigreega, waxaana Ra’iisul Wasaaraha Sudan Abdalla Hamdouk oo Adisababa wada-hadallo kula qaatay dhiggiisa Abiy Axmed uu sheegay in dalka Jabuuti la isugu imaan doono si xaaladda waddankaasi looga wada hadlo.
Shirka ayaa la filayaa in uu si rasmi ah ufurmo 20 December iyadoo madaxda urur goboleedka ee ka qeyb galeysa shirkaasina ay kusii qul-qulayaan magaalada Jabuuti ee waddanka Jabuuti.